» सुन–चाँदीको मूल्य बढेर, आज कति ?
सुन–चाँदीको मूल्य बढेर, आज कति ?
९ चैत्र २०७६, आईतवार ११:२२
काठमाडौं । सुनको मूल्य बढेको छ । आइतबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले बढेर ७६ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको हो । गत शुक्रबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ७५ हजार ५०० रुपैयाँ थियो । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले नै बढेर ६७ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत शुक्रबार तेजावी सुनको भाउ प्रतितोला ७५ हजार २०० रुपैयाँ थियो । यता, चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला २० रुपैयाँले बढेर ७ सय २० रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ७ सय रुपैयाँ थियो ।
संसारका अन्य मुद्राको तुलनामा बलियो हुँदै अमेरिकी डलर
एनआईसी एशिया बैंकद्धारा सबैजसो सेवाहरू निःशुल्क
अब विद्युत् महसुल बुझाउन ढिला भए पनि जरिवाना नलाग्ने
राहदानी विभाग यी ११ अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्रै खुल्ने
स्टक नगरे बजारमा अभाव हुन्न
अब जुनसुकै एटीएम बुथ प्रयोग गरे पनि शुल्क नलाग्‍ने